Ceelbacad - Wikipedia
Maqaal u qoran si qaab daran leh. Hadii aad aqoon u leedahay fadlan sax..
Degmada Ceel Bacad waa Degmo ka tirsan Gobalka Shabeelaha Dhexe, Waxay leedahay Bad, Dhul Dahabi ah oo daaqsinka ku wanaagsan , Dhul beereed, Dakad. Waxay ka mid tahay Degmooyinka ugu Dhaqaalaha Wanaagsan Gobolka Shabeellaha Dexe, waxaa Degmada ku nool Deg Jecel Nabadda kana shaqeeya Horumarka , Dadku waxay ka koobanyihiin Aqoonyahanno, Dhaqaatiir, Macalimiin, Arday, Bulshada Degmada waxa ka mid ah kuwa maskax wanaagsan leh sida Xoolo dhaqato, Beeraley, Ganacsato , Kallumeysatto, Fanaaniin , Abwaanno, Ciyaartooy. Dhaqaalaha Degmada waxa uu ku tiirsan yahay 41% Xoolaha Nool sida Ariga ,Geela iyo lo’da, 29% Ganacsiga sida Dharka, Cuntada, Bagaashka IWM. 22% Beeraha sida Tacbashada Galeeyda, Sisinta, Digirta, Masago iyo Nuucyada Qudaarta Dalka. 8% Kallumeysiga Nuucyada kala duwan ee Kaluunka iyo waxyaabaha Kheyraadka Badda laga helo. Faallo: Dadka dagan Degmada Ceel Bacad waxa la yiraahdaa “Yuusuf Daa’uud” ama “Boqorrada Abgaal” Yuusuf Daa’uud waa Qabiil weyn oo ka tirsan Beesha Daa’uud , Wacbuudhan , Abgaal ismaan , Mudulood. Yuusuf Daa’uud waxaa la sheegaa in ay yihiin Dadka Soomaalida ugu ixtiraamka badan, waxay leeyihiin Culimo Diinta, Aqoonyahanno, Dhaqaatiir , Siyaasiyiin, Wax garad iyo dad Wanaagsan. Beesha Yuusuf Daa’uud inta taariikhda la ogyahay kama qeyb galin Dagaaladii iyo Bur burkii ka dhacay Soomaaliya, Waxay taariikhda ka galeen Baal dahab ah iyagoo aan wali la sheegin Xad gudub ay sameeyeen. Yuusuf Daa’uud Waa Boqorrada ama Ugaasyada Abgaal Ismaan iyo Guud ahaan Mudulood, waxaana soomaalidu ay ku Xushmeysaa in ay yihiin Dad Ahlu diin ah Nabadda jecel. Dhanka caafimaadka: Degmada Ceel Bacad waxaa Ku yaala Isbitaal weyn oo ay leeyihiin Dadka deegaanka, isbitaalkaas oo lagu Magacaabo “Ceel Bacad Hospital” isbitaalkaas oo ay ka howlgalaan Dhaqaatiir wax kasoo baratay Dalka Gudihiisa iyo Dibaddiisa, sidoo kale Degmadu waxay leedahay MCH yo sido kale Degmada waxa laga helaa Dawooyinka Nuucyadooda kala duwan ha ahaadaan kuwa Xoolaha ama Dadka lagu Dabiibo. Dhanka Waxbarashada: Degmada Ceel bacad waxay leedahay Goobo waxbarasho oo Asaasi ah iyo kuwo Heer sare ah, Guubaha waxbarashada waxaa kamid ah Dugsiyada Qur’aanka Kariimka, Dugsiyada Hoose iyo Dhexe , Dugsiyada Sare , Macaahid si gaar ah loo leeyahay, Waxbarashada Degmada Ceel Bacad waa Mid horumar sameyneysa Marba marka ka danbeysa, Macalimiin iyo Aqoonyahanno farabadan ayaa ku sugan Degmada Ceel Bacad. Dhanka Masaajidda: Degmada Waxaa ay leedahay Masaajidyo lagu Cibaadeysto lagu barto diinta islaamka, kuwaas oo leh Imaamyo, Culumo Mashaa’iq iyo Xer badan oo diinta ka barata, Goobaha Cibaadada sida masaajidda iyo Mowlacyada waa kuwo la xushmeeyo. Markazyo: Degmada Ceel Bacad waxay leedahay Markazyo lagu barto diinta Islaamka iyo Goobo dhaqan celin ah, Goobo lagu xanaaneeyo Agoonta Dhanka Biyaha : Degmada Ceel Bacad waxay leedahay ceelal badan oo biyood, Ceelashaas waxaa ka mid ah GAL GOOF , MIIRTI RER GARBOOD, MIIR XAGAR Iyo kuwo kale, inkastoo aysan ku filleyn haddana si joogta ayey u kordhaayaan, taasoo mustaqbalka dhow gaarsiin doonta heer wanaagsan. Dhanka Kheyraadka Degmada Ceel Bacad waxay leedahay kheyraad Farabadan oo uu ku maneystay Allah Subxaanahu Wa tacaalaa, Kheyraadkaa waxaa ka mid ah Macdan Farabadan, Luul/ Dheyman iyo kheyraad kale oo dahsoon, waa arrin aan fari ka qodneyn, una baahan baaritaano culus. Waxa kaliye oo la ogyahay macdanta Manganiiska (Manganese), waxaase marag madoonto ah in Degmadaas uu kheyraad fara badan ceegaago. Degmada Waxay leedahay Xeeb dheer, Badda waxaa ku jira kheyraad badan, Kalluunka Nuucyadiisa Kala duwan ayaa laga helaa iyo kheeyraad badda oo dhameystiran. Dhanka Dekedda: Degmadu waxay leedahay Xeeb aad ugu haboon lagana sameyn karo Deked, Dekeddaas waxaa la Calaameeyay Xilligii hore ee Gumeysiga, waxay noqon kartaa mid aad ugu haboon gobalka guud ahaan in degmadaasi laga hir galiyo Deked shaqeysa. Maamulka , deegaan weynaha ay Degmada Ceel Bacad ka kooban tahay min Waax ,Tabello illaa iyo Xaafad waxaa ka jira maamullo iyo kala dambeyn oo ay u dheer tahay nabad, degganaan iyo isdhexgal Bulsho
Bulshada: Bulshada 97.8% Waa Yuusuf Daa’uud qeybihiisa kala duwan 2.2% waa Dad Marti ku ah Degmada ama Ganacsi iyo Caafimaad ama Waxbarasho u soo doontay.
Dhismaha Maamulka : Degmadu Waxay leedahay Maamullo ay soo doortaan Dadka Deegaanka ah, waxa loo sameeyay Maamullada sida : Guddoomiyaha Degmada Ceel Bacad , Gudoomiye Kuxigeenka Degmada Dhinaca Arrimaha Bulshada, Gudoomiye Kuxigeenka Degmada Dhinaca Arrimaha Siyaassadda , 4 Guddoomiye Waaxeed, Guddiga Xallinta khilaafaadka, Guddiga Gargaarka iyo Horumarinta Deegaanka, Guddiga isku xirka Jaalliyadaha iyo Xiriirka Caalamiga iyo Guddiga Nadaafadda Iyo Wacyi galinta Bulshada, Guddiga Caafimaadka iyo Gargaarka. Fanka iyo Suugaanta Degmada Ceel Bacad waxay kale oo caan ku tahay Fanka iyo Suugaanta. Kuwooda xagga Lookalka(Degmada) ugu cad-cadaa waxaa ka mid ahaa, Shiribka , Guuroowga, Gabayada , Wilsiqada, Heesaha, Dhaantada IWM. waxaa waagii Berisamaadka Fiidadkii lagu qaban jiray Barnaamijyo Maaweelo iyo Maddadaalo ah, sida Riwaayadaha, Goo-Goosyo Heeso & Tartanka Hiddaha & Dhaqanka. Waxaa kasoo jeeda Abwaanno, Fanaaniin, Majaajiliiste-yaal Qaranka usoo shaqeeyay. Kubaddaha Cagta & Koleyga (Basketball) Degmada Ceel Bacad wax yaabaha ay caanka ku tahay waxaa ka mid ah soo saarida Ciyaartooy fara badan oo ku caan noqday Kubaddaha Cagta iyo Koleyga isla markaana xubno muhiim ah ka soo noqday Xulalkii kala dambeeyey ee metalayey Qaranka Soomaaliya. Waxaa kaloo Degmada Ceel Bacad aad loogu xusuustaa tartamaddii lagu qaban jiray Garoonka Kubadda Cagta ee ee ku yaal Xarunta Degmada horteeda. Sanad walba Bisha Barakaysan ee Ramadaan ayaa waxaa Garoonka lagu qaban jiray Tartan Kubadda Cagta oo ay ka soo qeyb geli jireen Ciyaartooyda ugu farsamada fiican ee xilliyadaa ku noolaa dhamaan degmooyinka Gobalka Shabeellaha Dhexe ka kooban tahay. Tartanka Ramadaanka oo aad u xiiso badnaa áyaa waxa u soo daawasho tegi jiray Dadweyne ka kala yimid degaano fog. Xiiso loo qabo darteed ayeey Taageerayaasha Kubadda jecel door bidi jireen inay goob joog ka ahaadaan cayaar walba ilaa iyo firimbiga ugu dambeeyo la yeeriyo, ka dibna waxay u afur doonnan jireen guryahooda oo ku yaal Degmooyinka ay ka yimaadeen. Waxaa wali inoo dhiman waxyaabo kale oo dheeraad ah Sawiro, Muuqaalo , Qariidad , sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa Aqoonsiga Degmo ahaan ee Ceel Bacad iyo Taariikh kale oo aan wali daba joogno. W/D: Bashiir Macalin Cali Xassan Dhagey “Bk” Muqdisho-Somalia Tel: 0617200200
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceelbacad&oldid=153137"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Febraayo 2016, marka ee eheed 03:24.